Online Shaqiniz Vs. New Yarışmacılar - Semalt'tan 3 Awesome Ipucu
Hal bilaash ah oo laga furo internetka waa mid fudud. Dhibaatada shaqsiyadeed waa mid adag. Hagaajinta xajinta, raf alim rafları ayaa lagaa rabaa inaad bixiso iyo qaybta ganacsiga ee lacag bixinta sida lacag bixinta sida - vps low cost usa. Hase yeeshee, internetka e-ticaret ee xaaladdu sidaasi ma aha. Macluumaadka aasaasiga ah ee qofku leeyahay waa mid ka mid ah qof kasta, oo bilawga ah, iyo internetka laga helo si aad u wanaagsan.
Xogtan akılda akhri, wax kasta oo ka mid ah bilawga ama dhexdhexaadinta ganacsadaha, cusub ee shirkadaha ganacsiga ka imanaya adag tartiible u soo gudbaya kalabileceği açıktır. Macaamiishan cusub ayaa ah in ay ku maal gashadaan shirkado badan oo ku takhasusay ganacsigooda iyo in ay adeysatid lacagaha ay bixiyaan.
Shirkadda E-ticaret işletmesi, Semalt'in , Kudemli Customer Success Manager Nik Chaykovskiy provided by tips on tracking, this type of new startlayanlarla rekabet edebilir.
1. Isticici Isticmaal Qodobbadeedka Isticmaalka
Qalabka suuqa kala iibsiga, banner advertisingcılık, PPC ads, iyo hatda Amazon iyo eBay sida guuleysta sheygaarka meeleynta. Intaas waxaa dheer, shirkadaha waaweyn, kharashka ku baxa sida isticmaalka hababka isticmaalka. Tusaale ahaan, shirkad, qof ka mid ah shirkad ayaa ku biiri doona soo bandhigi doona muujinaysa. Kusoo dhawaansho, qofku waa inuu ku qanacsan yahay. Wareegtadani, PPC advertising ka badan ayaa iibineysa.
Macaamiisha muusikada ah ee loogu talagalay si ay u noqdaan kuwo ku shaqeeya sida barashada tiknoolajiyada..Sosial medya pazarlama ve e-mail adresinden sonra paylaşmayı etkinleştirin. Dhiibaan, si toos ah macaamiisha u hesho si aad u hesho SEO for de iyidir. Inta badan, dadku macaamiisha ayaa kufarta.
2. Xiddigaha Adeega Adeegga
Adeega koowaad ee adeegga macmiilka, si cusub u dir si toos ah. Waqtigaas waxaa ku jira ganacsade ahaan, tani waa mid aad uwanaagsan. Tusaale ahaan, macaamiishu waa mid aad u fiican. Qaar ka mid ah, qaar ka mid ah macluumaadkaaga ayaa ku weydiin doona, ama waxaad ku arki kartaa Google. Xiddigaha soo dhaweynta ah ayaa soo dhaweynaya sheekadaada iyo kalsooni cusub.
3. Waxyaabaha Bixiyeyaashu Noqdo
Inta badan, waa mid cusub oo rakibey macaamiishii hore ee shirkadihii hore. SEO, in badan oo ka mid ah cilmi-baarayaasha ayaa la wadaagayaa raadinta hacmini sharema. Ugu dambeyntiina, waa inaad horey u soo sheegtaa shirkad aad u baahan tahay inad u noqoto mid istaraatiijiyadeed. Soo dhaweynta ku soo dhawow e-mail pazarlama si aad u fiican. Mid ka mid ah macaamiishii hore u mahadceliyey iyo yaraanta ficil-qadar ah oo la bilaabi karo. Qaar ka mid ah xaaladaha qaarkood, iibsato wixii alaab ah oo bilaash ah. Macaamiishii dib laguu soo celiyey dib markii aad horey u soo iibsatay tekniklerina.
In badan oo ka mid ah ganacsadaha, badanaa bilaabay initiatives berk rekabetle karşı karşıya. Internet marketlamacılığına cesaret eden insanlar, ton başına SEO teknikleri uygularken yanı sıra parlak yeni bir rakiple sahneye çıktığı zaman, web sitenize gelen trafikte bir düşüş var. Tani, rakibiniz, Gawaarida aad ka heshay, SERP natiijooyinka ay ku jiraan waxay ku jiraan oo dhan SEO dhimid. Hase yeeshee, marka ay noqoto midkale oo dib u soo celin karta iyo sababtoo ah tartabarka ayaa hoos u dhigi kara. Halkaan waxaad ka heli kartaa macaamiishii aad ku soo celin kartid iyo ugu sareeyso booskaaga.